Ntanetị na ịkekọrịta: igodo abụọ iji rụọ ọrụ nke GNU / Linux | Site na Linux
Edemede a bụ enyi nke Obodo Cuban Free Software Community maka GUTL Portal ma achọrọ m iweta ya ebe a ka m gosi gị otu uru dị n ’i iji ya eme ihe Software Nwepu: "Kekọrịta".
Site: Delio G. Orozco González.
Ọkọ akụkọ ihe mere eme.
Onye nchịkwa akụkọ ihe mere eme.
Manzanillo nke Cuba.
Edere ahịrị ndị a na laptọọpụ a ma ama HASEE, na kaadị vidiyo: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Ngosipụta Ngosiputa (rev 10) , otu n’ime ihe ndị ahụ na - adịghị ahụkebe na - ahapụ isi anyị ọkụ; sistemụ arụmọrụ na-enye ya ndụ bụ Debian 6, onye nhazi okwu bu FreeOffice 3.4.4 na ọ joyụ m na mkpebi ahụ bụ nwa afọ nke ihe ndị ahụ: 1280 × 800.
Mgbe ọ bịara n’ike m, ụdị nke Windows XP Ahụtụbeghị m, ọ bụ otu n'ime ọtụtụ omenala ndị ahụ, echere m n'ụzọ nke ndị eleghara anya, nke doro anya nyeere anyị aka n'oge ụfọdụ n'ihi na ọ dịghị mkpa ịgbawa ha. Rara m ka m na nkà ihe ọmụma nke SWL, ọ bụghị nke ukwuu, na site na ofufe ruo "fanoso" - ejiri amamihe kwuo enyi ya nwụrụ anwụ-, e nweghị ọzọ otu nzọụkwụ, M kpebiri na m ihichapu mepụtara nke Bill Gates ma wụnye ihe e kere eke nke Ian Murdock kwuru; nke ọma, ekele ịdị n'otu (gụọ ike), nke mbụ Alberto Garcia Fumero ma mgbe Abel menes na ndị ọrụ ibe ya na Isi ụlọ ọrụ mpaghara nke ICU na Granma, enwere m mmelite emelitere nke oke nkesa a Linux; ọ baghị uru ikwu -Ha amaala site na ahụmịhe ha-Inwe repo otu ụbọchị bụ, na SWL ụwa, inwe 90% nke agha meriri.
Na iso nke Debian 6.0.1a na aka m malitere ọrụ m na ihe niile bụ ọ joyụ ruo oge m nwara ịgbanwe mkpebi ihuenyo site na 14.1 sentimita, nke ọma 800 × 600 emeghị. Na ngosipụta nke ụdị dị otú a na mkpebi a, akụkụ nke windo dị na mpụga ebe ọrụ, ọ dị mkpa ịkwaga akwụkwọ mpịakọta mgbe niile na ọdịdị mgbasa nke akwụkwọ ozi na eserese abụghị ihe na-atọ ụtọ. N'ihi ya, m gara m repo, arụnyere dị ka ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala dị ka o nwere na nkọwa ya "sis" ma ọ bụ ihe niile na ihe efu; M wee chọọ faịlụ nke nwere ihe yiri ya "Xorg", ma achọtaghị m ihe ọ bụla, ma e wezụga ụfọdụ faịlụ na / usr / share / doc na ha emeghị ihe ọ bụla site n'ọrụ si ele ihe anya, m na-eche.
Mgbe ahụ mkpebi enweghị ike ịbụ ihe ọzọ karịa ide ede na ndepụta nke ỌR. na, n’onwe m, ndị ọrụ ibe m kwenyere nwere ike inyere m aka. Edere ihe odide m; ma ọ dịghị nke ngwọta ahụ rụrụ ọrụ, ọ nweghịkwa ike ịrụ ọrụ n'ihi na ọ bụghị ihe gbasara ntọala, mana nke ndị ọkwọ ụgbọala, "mana amaghị m ya", dị ka abụ ochie Enmanuel na-ekwu; Agbanyeghị, ozi enyere nyere bara uru n'ihi na amụtara m ihe ọhụụ ma kwere m mgbe m gwara gị: ihe ọmụma adịghị arọ, ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ na-ewere ohere ma bara uru mgbe niile, ọ na-eso gị ebe ọ bụla ị gara ma n'adịghị ka ncha, ka ị na-eji ya, ka ọ na-ebuwanye ibu.
Itinye usoro ikpe na usoro mmụta nke njehie, m kwụpụrụ ya xerver-xorg-vesa na voila!, ihe eserese eserese furu efu n'ihi na agbanyeghị na-emepụta ngwaọrụ vidiyo site Ngwakọta Ngwakọta Silicon, adịghị arụ ọrụ na ya xerver-xorg-sis ihe usoro na-eweta; kama, jiri nke nke lee. Ọfọn, n'ụzọ ụfọdụ m ga-amụta na ị ga-ekwu, ọzọkwa m gbanyere ọzọ Debian 6; tupu, M na-agbalị na Onye isi 10.04, na nhazi nke Debian con Lxde ihe otu onye ọrụ ibe anyị Félix Pupo mere; ma ọ dịghị ihe, ọbụnadị ihuenyo mbụ pụtara.
Ya mere, achọre m ozi na andntanetị ma nweta onye ọkwọ ụgbọala nke m mere ngwa ngwa na ngwa ngwa na laptọọpụ; enwetaghachiri m olile anya mana ọ rụghịkwa ọrụ, enwere esemokwu nke gburu interface eserese ọzọ. Ọkwa nke nkụda mmụọ bụ na ọ dugara m na mkpebi siri ike: wụnye Windows 7 Servipack 1 n'ihi na -ka ha na-ekwu-Nnukwu OS a bụ n'ihi ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ọ na-akwado; agbanyeghị, jiri kaadị ahụ 771/671 PCIE VGA nkwụnye nkwụnye (rev 10) meputara site na Ngwakọta Ngwakọta Silicon ihe adighi nfe, umu mmadu Silicon Valley naanị jisiri ike weta mkpebi ahụ 1280 × 768 na nkowa nke akwụkwọ ozi ahụ abụghị nke kachasị mma, a ga-atụ anya ya, onye nrụpụta ahụ mere ya 1280 × 800.
N'oge a, otu echiche mebiri mmụọ m: "M ga-ebudata onye ọkwọ ụgbọ ala maka Windows ma ree HASEE nwere obi ụtọ", ka emechara, yana ego sitere na omume nke ịzụrụ na ire ere m nwere ike ịnwa ịnweta kọmputa nke ga-enye obere isi ọwụwa ma mee ka Linux jiri obi ụtọ karịa; N'agbanyeghị nke a, ebe m matara na nnụnụ ji n'aka ruru otu narị ụgbọ elu, ekpebiri m ịme nke ikpeazụ. M wee jide nke iso nke Molinux efu, Spanish minimalist distro sitere n'ike mmụọ nsọ Linux Puppy, na kedu ihe ga-eju m anya ịhụ na ọ jisiri ike weta mkpebi ahụ 1280 × 768 na nkowa nke mkpoputa nke kariri nke enyere site Windows 7.
Enwere m afọ ojuju maka ihe a, m kwuru okwu na ndepụta nke ỌR. na, n'ezie, enwetara m agbamume nke ndị enyi m. Ugbu a, na oke mmụọ, m laghachiri na andntanetị wee chọta na adreesị http://www.vivaolinux.com.br/index.php, (Akwụkwọ Brazil) "Ọkwọ ụgbọala SIS 671/771 + Xorg abụghị Ubuntu Lucid Lynx"; Luckily, Portuguese bu asusu Romance, nke sitere na Latin dika Spanish, na ichota ihe ekwuru na odighi isi ike; Ọzọkwa, nkọwa ndị iwu na ụzọ ndị ọzọ kwadoro mere ka ọrụ ahụ dị mfe.
Onye edemede nke post, Jakson Galeti, nyere njikọ iji budata ndị ọkwọ ụgbọala maka 32 na 64 bit dabere na ụlọ ahụ, na faịlụ nke na-agaghị agafe 265 kbytes (Windows dị n'etiti 17 na 18 Mbytes), juru n'ime faịlụ tar.gz. Ọ bụ ezie na azịza ya nyere Ubuntu, Echere m n'ime obi m na ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ na nne na nna distro, yabụ, ọ bụ m jisiri ike nweta kaadị nnupụisi iji wepụta mkpebi kacha mma nke 1280 × 800.
Nke a abughi edemede nke sayensi, o gaghi ekwusi ike itinye nkwubi okwu. Agbanyeghị, ahụmịhe akọwapụtara na-egosi dị ka ihe ga-eme ka ịkọkọrịta ihe ọmụma na ịnweta ya na ịntanetị na-abụ usoro mgbanwe izizi maka iji rụọ ọrụ nke ọma GNU / Linux; O chefuela etu Torvalds siri mee ka echiche ya buputa nke oma na amuputara oru ya? Chọpụta ee, m ga-ekele Galeti maka onyinye ya na m ga-etinye nkuzi ahụ na wiki nke ỌR. n'ihi na amaara m na ọtụtụ ndị ọrụ ibe anyị enweghị ike ịbanye na andntanetị na ịkekọrịta ihe ọmụma na ozi na-aghọ usoro isi nke nkà ihe ọmụma anyị na n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, a ga-akpọ usoro ndị a aha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ntanetị na ịkekọrịta: igodo abụọ iji rụọ ọrụ nke GNU / Linux
Edemede dị ukwuu, enwere olile anya na onye ọ bụla ga-eche ma mee otu ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụ otu ahụ ka m siri mụta obere obere iji Linux.
Enweghị m ike ịhapụ ịkọ na m gara na blọọgụ a kwa ụbọchị n'ihi na ọ na-enyere m aka, ịchọpụta na idozi nsogbu ndị bilitere na Debian.
Ọrụ ị na-arụ dị ebube: "site na Linux".
Zaghachi patrizio santoyo
Nabata patrizio santoyo:
Daalụ nke ukwuu maka okwu gị, n'ezie 😀
Daalụ maka ileta anyị ma nye echiche gị, n'ezie 🙂
Akụkọ na-akpali mmasị. Nke a na - egosi na ịkwesighi ime dịka ọtụtụ ndị ọrụ si Windows, na ụfọdụ distro anaghị arụ ọrụ maka ha oge mbụ na ozugbo ha debere Linux. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe rụọ ọrụ, ewerela ya dị ka ihe nzuzu, rụọkwa akụkụ gị.
Ekele diri onye edemede si n’aka m, ezigbo ezigbo akụkọ 😉
Ihe dị ka nke a emeela m oge ụfọdụ kemgbe m nọ na Linux. N'oge niile, ọ dị m ka amata m nke onye dere edemede ahụ, heh heh.
Eziokwu bụ na nke a bụ ihe dị mma (ọ bụ ezie na ụfọdụ ga-ekwukwa ihe ọjọọ) nke ụwa nke GNU / Linux, enwere ụzọ mgbe niile iji mee ka ihe na-arụ ọrụ, onye ọ bụla ga-anwaleworị ya, na karịa karịa ihe ị na-amụta n'ụzọ. Dị ka okwu gara aga kwuru, echere m na amata m na nkebi ahịrịokwu ahụ dabara n'ụzọ zuru oke, ebe ọ bụ na enweghị ịntanetị ọ ga-ekwe omume na ihe a niile ga-adị egwu.
Ọmarịcha akụkọ. Adala mba.
Intel na-enye LibreOffice maka nbudata na AppStore